Hanuuniye - Free Android app | AppBrain
Android Apps > Education > Hanuuniye
Hanuuniyeapp is a e laearning app
by Tabaarak Tech
May 25, 2021 Update Version 2.9
Apr 20, 2021 Update Version 2.8
Mar 11, 2021 Update Version 2.5
Feb 15, 2021 Update Version 2.3
Feb 9, 2021 New App Version 2.0 in EDUCATION for Free
Muxuu yahay HANUUNIYE APP?
Adeeggan HANUUNIYE, waa adeeg loogu talo galay inuu dadweynaha u soo dhaweeyo, kana caawiyo barashada diinta, isaga oo u qaabaysan hab waxbarasho rasmi ah oo uu qofku ku dhiganayo casharro diina ah oo tayaysan, ayna u dhigayaan culimada soomaaliyeed, isla markaana uu ardaygu ku heli doono shahaado caddaysanaysa maaddooyinka uu qaatay.
Intaas waxa dheer, su’aalo ama fatwooyin diini ah oo culimada ugu waaweyn ee soomaalidu ay ka jawaabeen, iyaga oo u diyaarsan hab qoraal iyo dhegaysi ba ah, iyada oo wixii wedyiin ah ee intaa aan ahayn ee uu macmiilku u baahdo uu si toos u soo weydiin karo culimada.
•	Faafinta aqoonta diiniga ah iyo wanaag kasta oo bulshada manfac iyo waxtar ugu jiro.
•	Soo gudbinta aqoon diineed oo halabuur leh.
•	In bulshada soomaaliyeed laga shaafiyo su’aalahooda diinaga ah ee ay tabanayaan.
•	In umadda laga haqabtiro aqoonta diineed iyo aqoon kasta oo manfac u leh.
•	Fudaydinta iyo soo dhaweynta waxbarashada asaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah ruuxa muslinka ah.
•	Hirgalinta waxbarasho diineed oo sugan, tayo leh, oo fudud.
•	In tikniloojiyadda looga faa’ideeyo diinta, ruuxa muslinka ahna loo soo dhaweeyo baahidiisa asaasiga ah ee diineed.
•	In la isku xidho bulshada iyo culimada, is haleelkoodana la fududeeyo.
•	In culimada laga reebo dhaxal ay dheefsadaan jiilasha soo socda.
•	Kor u qaadidda aqoonta iyo waciyga diineed ee bulshada.
•	Ururinta kayd aqooneed diini ah oo dhaxagal ah
•	In bulshada lagu gaadhsiiyo aqoonta diineed hab kasta oo casri ah oo suuragalaya.
•	Ka qaybqaadashada faafinta aqoonta diiniga ah iyo guud ahaan khayrka iyo wanaagga.
aqoon aqoonta asaasiga bulshada culimada dhaweeyo diineed diini diiniga diinta faafinta hab hanuuniye intaa iyo kasta laga leh manfac muslinka ruuxa soo soomaaliyeed ugu waxbarasho
aad allah alle badan fiican iyo lahaa masha waa waxaan
aad allaah allah alle app fiican maasha masha siiyo waa
bilaash hore inuu iyo lacag laga lahaa uga waa waxaan
More from Tabaarak Tech
Hargaysa money exchange